23 Na Dawid nyin bɔɔ akwakoraa,+ na nna mee no. Enti ɔde ne ba Solomon+ sii Israel so hene. 2 Ɛnna ɔboaboaa Israel mpanyimfo+ ne asɔfo+ ne Lewifo+ no nyinaa ano. 3 Na wɔkan Lewifo a wɔadi mfe aduasa rekɔ no;+ mmarima a wɔkan wɔn mmiako mmiako no dodow yɛ mpem aduasa awotwe. 4 Eyinom mu mpem aduonu anan na wɔhwɛɛ Yehowa fie adwuma no so, na wɔde mpemnsia nso yɛɛ ahwɛfo+ ne atemmufo;+ 5 ná mpem anan yɛ apon ano ahwɛfo,+ na mpem anan nso de nnwonto nneɛma+ a Dawid kae sɛ “mayɛ sɛ wɔmfa nyi ayɛ” no yi Yehowa ayɛ.+ 6 Afei Dawid kyekyɛɛ wɔn mu akuwakuw+ sɛnea Lewi mma te:+ Gerson, Kohat ne Merari. 7 Gersonfo no: Ladan ne Simei. 8 Ladan mma ne otitiriw Yehiel,+ Setam ne Yoel,+ wɔyɛ baasa. 9 Simei mma ne Selomot, Hasiel ne Haran, wɔyɛ baasa. Eyinom ne Ladan abusuafie mpanyimfo. 10 Simei mma ne Yahat, Sina,* Yeus ne Beria. Baanan yi ne Simei mma. 11 Yahat ne wɔn so panyin, Sisah na odi hɔ. Yeus ne Beria de, wɔanwo mma pii, enti wɔde wɔn boom yɛɛ wɔn abusuafie+ biako na wɔmaa wɔn adwuma koro. 12 Kohat mma+ ne Amram, Yisar,+ Hebron+ ne Usiel,+ wɔyɛ baanan. 13 Amram mma ne Aaron+ ne Mose.+ Nanso woyii Aaron sii hɔ+ sɛ ɔne ne mma ntew Kronkron mu Kronkronbea+ no ho daa, na wɔmmɔ afɔre+ Yehowa anim, na wɔnsom no,+ mfa ne din nhyira+ nkosi daa. 14 Na nokware Nyankopɔn nipa Mose+ de, wɔkan ne mma no fraa Lewi abusuakuw mu.+ 15 Mose mma ne Gersom+ ne Elieser.+ 16 Na Gersom mma no bi ne otitiriw Sebuel.+ 17 Elieser babarima ne otitiriw Rehabia;+ Elieser anwo bio anka ne ho, nanso Rehabia woo mma bebree. 18 Yisar+ mma no bi ne otitiriw Selomit.+ 19 Na Hebron mma ne otitiriw Yeria, nea ɔto so abien ne Amaria, nea ɔto so abiɛsa ne Yahasiel, na nea ɔto so anan ne Yekameam.+ 20 Usiel mma+ ne otitiriw Mika, na nea ɔto so abien ne Yisiya. 21 Merari mma+ ne Mahli ne Musi.+ Na Mahli mma ne Eleasar+ ne Kis. 22 Nanso Eleasar wui a wanwo mmabarima na mmom ɔwoo mmabea. Enti ne nua Kis mmabarima no warewaree wɔn.+ 23 Musi mma ne Mahli, Eder ne Yeremot,+ wɔyɛ baasa. 24 Eyinom ne Lewi asefo a wɔkan wɔn bobɔɔ wɔn din sɛnea wɔn mmusua te ne sɛnea wɔn agyanom abusuafie te,+ mpanyimfo a wɔde adwuma hyehyɛɛ wɔn nsa, Yehowa fie adwumayɛfo+ a wɔadi mfe aduonu rekɔ.+ 25 Ná Dawid aka sɛ: “Yehowa, Israel Nyankopɔn ama ne man anya ɔhome,+ na ɔbɛtena Yerusalem akosi daa.+ 26 Na Lewifo no nso rensoa ntamadan no ne emu nneɛma a wɔde som wom no bio.”+ 27 Eyinom ne Lewi asefo a wɔadi mfe aduonu rekɔ a wɔkan wɔn sɛnea Dawid asɛm+ a ɔka twaa to no te. 28 Wɔn na na wɔboa Aaron asefo+ no, na wɔn som adwuma wɔ Yehowa fie hɔ ni: wɔhwɛ adiwo+ ne adidibea+ no so, na wɔtew akronkronne no ho+ yɛ nokware Nyankopɔn fie som adwuma, 29 wɔyɛ paanoo a wɔde kyerɛ+ ne esiam muhumuhu+ a wɔde bɔ aduan afɔre ne paanoo ntraantraa+ a mmɔkaw nnim+ ne paanoo a wɔtõ wɔ apampaa+ so ne mmɔre a wɔafɔtɔw;+ na wɔhwɛ nneɛma a wɔde susuw ade so, nketewa ne akɛse nyinaa;+ 30 na wogyina hɔ+ anɔpa+ biara da Yehowa ase+ yi no ayɛ,+ na anwummere nso, wɔyɛ saa ara; 31 wɔboa ma wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ Yehowa anim daa homeda+ ne ɔsram foforo+ ne afahyɛ bere+ mu, dodow a mmara kyerɛ sɛ wɔmmɔ mma Yehowa no. 32 Wɔn nso na wɔwɛn+ ahyiae ntamadan ne kronkronbea+ hɔ ne wɔn nuanom Aaron asefo a wɔyɛ Yehowa fie som adwuma no.+
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Sisah wɔ nky 11 no.